ShweMinThar: May 2008
တူနာငါးသေတ္တာ - (၁) ဘူး
ပုစွန်ခြောက် - စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း (ညက်ပြီးမွနေအောင် ထောင်းထားပါ။)
ငရုတ်သီးတောင့် - ၄တောင့်
ကြက်သွန်နီဥသေး - ၅လုံး (အခွံနွှာထားပါ။)
ကြက်သွန်ဖြူ - ၁၀မွှာ (အခွံနွှာထားပါ။)
သံပုရာရည် - စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
သကြား - ဇွန်းတစ်ဝက်
ရေနွေးဆူဆူ - ၁^၄ ခွက်
ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ကြက်သွန်နီနှင့် ငရုတ်သီးများကို အပူပေးထားသောအိုးထဲထည့်ပြီးလှော်ပါ။ ကျက်လောက်သည့်အခါ အိုးပေါ်မှချပါ။
လှော်ထားသော ငရုတ်သီး၊ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူများကို ညက်အောင်ထောင်းပါ။ တူနာငါးထည့်ပြီး ဆက်ထောင်းပါ။ ပြီးလျှင် ငံပြာရည်၊ သံပုရာရည်နှင့် သကြားရောထည့်ပါ။ အရသာအနေတော် ဖြစ်မဖြစ် မြည်းကြည့်ပါ။
ရေနွေးအနည်းငယ်လောင်းထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပေးပါ။ ၄င်းတို့ကို ပန်းကန်ထဲပြောင်းထည့်ပြီး အပေါ်မှာ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်ဖြူးပေးပါ။ မိမိနှစ်သက်ရာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် တွဲဖက်၍ အတိုးအမြှုပိလုပ်ပြီး စားသုံးနိုင်ပါသည်။
သင့်နှလုံးကျန်မာရေးအတွက် လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်တဲ့ အချက်(၁၀)ချက်
၁။ နေ့စဉ်မိနစ် ၃၀လမ်းလျှောက်ခြင်းဟာ နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရမှု အန္တာရယ်ကို ၃၀% လျှော့ချနိုင်ပါသည်။
၂။ သွေးပေါင်ချိန်အမြဲချိန်ပါ။ သွေးပေါင်ချိန်ကို အမြဲတမ်း 115/75 mmHg အတွင်းထိန်းထားပါ။
၃။ နေ့စဉ် အစေ့အဆန်တစ်အောင်စ (အစိတ်သားခန့်) စားပါ။ အစေ့အဆန်စားခြင်းဖြင့် ကောင်းသော ကိုလက်စထရော(လ်) ပမာဏကို မြင့်တက်စေပြီး သွေးကြောများ ရောင်ရမ်းမှုကို ကျစေပါတယ်။
၄။ ကောင်းသော ကိုလက်စထရော(လ်) (HDL)ပမာဏ ကိုအမြဲစစ် ဆေးနေပြီး(HDL) ပမာဏ ၅၀နှင့်အထက် ရှိနေပါစေ။
၅။ တစ်ပတ်လျှင် ခရမ်းချဉ်သီးဆော့(စ်) ထမင်းစားဇွန်း ၁၀ဇွန်းထက် မနည်းစားပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့(စ်)မှာပါတဲ့ ပိုတက်စီယမ်ဟာ သွေးပေါင်ချိန်ကို သိသိသာသာကြီး လျှော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ သွားကြားမှန်မှန်ထိုးပါ။ သွားသန့်ရှင်းရေး ပုံမှန်ပြုလုပ်ပါ။ သွားဖုံးများ ကျန်းမာရေးကောင်းမှ သွားခြေပိုးဝင်မှုမရှိဘဲ သွေးကြော ရောင်ရမ်းမှုများမဖြစ်ကာ နှလုံးကျန်းမာရေးကို ရှေးရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၇။ နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ အဆီများ၌ ပြည့်ဝအဆီကို တစ်နေ့လျှင် 20gm (တစ်ကျပ်ခွဲသား) ထက်မပိုပါစေနဲ့။ တစ်ဝက်တစ်ပျက် အကြော် ခံဆီတွေကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ပါ။
၈။ အစားအသောက်တွေကို မစားသုံးမီအစားအစာဘူးခွံတွေ အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းစာရင်းကို သေချာဖတ်ပါ။ အစားအစာပါဝင်စာရင်း၌ အများဆုံးပါဝင်သောစာရင်း ၅ခုတွင် သကြားပါဝင်မှုသည် ထိပ်တန်းကပါဝင်နေပါက ထိုအစားအစာကို အမှိုက်သရိုက်စာ(Junk Food) အဖြစ်မစားပါနှင့်။
၉။ နေ့စဉ် ၀ိုင်တစ်ခွက်(သို့မဟုတ်) ဘီယာတစ်ခွက်သောက်ပါ။ သို့သော် တစ်ပတ်စာ ၇ခွက်ကို တစ်ရက်တည်းထိုင်သောက် တာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။
၁၀။ နေ့စဉ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်သီးနှံအစုံအလင် ၉မျိုးခန့်ကို စားသုံးပါ။
အဆိုပါအချက်၁၀ချက်အနက် အမှတ်စဉ် ၁ မှ ၇ အထိကို ဆေးလိပ် ရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အတူ တွဲဖက်ကျင့်ကြံပါက နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်း အန္တရယ် ၉၀%အထိ လျှော့ချနိုင်ပါကြောင်း အဆိုပါ အချက်၁၀ချက် အကြံပြုချက်ကို ရေးသားသော ဒေါက်တာ မိုက်ကယ်အက်(ဖ်)ရိုဇန်က ဆိုပါတယ်။
Ref: Reader' Digest
ထမင်း - ခွက် ၄ခွက်စာ
ကဏန်းသား - ခွက်တစ်ခွက်စာ၊ ချက်ပြီးအခွံနွှာထားပြီး
ကြက်သွန်နီ - ခွက် ၃ပုံ ၁ပုံစာ၊ အတုံးတုံးထားရန်
ပဲငံပြာရည် - စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
ဆော့ - စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဝက်
သကြား - စားပွဲတင်ဇွန်း၂ဇွန်း
ဆီ - စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
ကြက်သွန်ဖြူ - စားပွဲတင်ဇွန်း၂ဇွန်း၊ တောက်တောက်စင်းထားရန်
ကြက်သွန်မြိတ်နှင့် သခွားသီး - အနည်းငယ်
- ကြက်သွန်ဖြူကို ဆီအိုးထဲတွင် ရွှေရောင်သန်းလာအောင် ကြော်ပါ။ပြီးလျှင် ကြက်သွန်နီ အရင်ထည့်ကာကြော်ပြီး ကဏန်းသားထည့်ကြော်ပါ။ ထို့နောက် အိုးဘေးဖက်သို့ အသာကပ်ထားပါ။
- ထို့နောက် ဆီအနည်းငယ်ဖြင့် ကြက်ဥကို ခလောက်ကြော်ကာ၊ ထမင်းကိုပါထည့်ကြော်ပါ။
- ပဲငံပြာရည်၊သကြားတို့ကိုထည့်ကာ နှံ့စပ်အောင် ရောမွှေပြီးကြော်ပါ။
- ပြီးလျှင် ပန်းကန်ပြားထဲသို့ထည့်ပြီး ငရုတ်ကောင်း၊ကြက်သွန်မြိတ်တို့ဖြူးကာ သခွားသီးရံပြီး အရသာရှိသော ကဏန်းသားထမင်းကြော်ကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
အမဲသားကောက်စိုက်မချက်ကို ချက်မယ်ဆိုရင် အမဲသားကို အသားချည်းမ၀ယ်ပါဘူး။ အသားနဲ့ အရွတ်အကြော တွဲလျက်ဝယ်ပါတယ်။ အဲဒီ အကြောအရွတ်ပါတဲ့ ပြုတ်လုံးလုံးပြီးသား အမဲသားအဖတ်လေးတွေကို ပါးပါး သေးသေးလေးလှီးတယ်။ ပြီးတော့ ခရမ်းချဉ်သီးလေးတွေလည်း ပါးပါးလှီးတယ်။ အညာ ငရုတ်သီးတောင့်ပွတွေကို လေးစိပ်စိပ်၊ ကြက်သွန်နီကိုရိတ်ရိတ်လေးတွေ လှီး၊ ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကို ထောင်း၊ အားလုံးလည်း ပြီးရော ဒယ်ပိုင်းလေးထဲ အသားနဲ့ အဆာပလာတွေ အကုန် ရောထည့်၊ ဒယ်အိုးထဲ ရေသုံးပုံ နှစ်ပုံလောက်ထည့် ဆီလေးပါလေကာ လောင်းထည့်၊ မီးဖိုပေါ်တင် ရေတွေပွက်ပွက်ဆူလာတော့ အကုန်လုံးရောမွှေ၊ ပြီးတော့ အပေါ်ရေ ကိုသောက်ကြည့်၊ အပေါ့အငန် မြည်း၊ ဆားလို၊မလိုကြည့်၊ ခဏကြာရင် ဒန်အိုးအဖုံးလေး လှပ်ကြည့်၊ရေ အနေတော်လောက်ဆိုရင် ချလိုက်။ အမဲသားဖတ်လေးတွေ ဟင်းရည်ထဲ မြှုပ်နေပြီး ခရမ်းချဉ်သီး ကြက်သွန်ဖြူ ၊ နီတွေကလည်း ကြေသွားပြီး ငရုတ်သီး အပွအဖတ်တွေဘောလောပေါ်နေတဲ့ ]အမဲသား ကောက်စိုက်မချက်} ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မည်။
အမဲသား ကောက်စိုက်သမချက် ချက်ဖို့ ပထမဆုံး အမဲသားကိုပြုတ်လုံးလုံးပုံကို ပြောပြပါ့မယ်။ အမဲသားကို သင့်ရုံ တော်ရုံလေးတွေတုံး၊ ပြီးတော့ ဆားလေး နနွင်းလေးတော်ရုံနဲ့နယ်၊ ရေကို အမဲသားတုံးတွေ မြှုပ်နေအောင်ဖြည့်၊ မီးသွေး မီးအေးအေးပေါ်မှာတင်၊ ရေခန်းခါနီးတော့ ဆီလေးနည်းနည်းထည့်ပြီး မွှေပေးလိုက်တယ်။ ရေခန်းသွားတော့ ဟင်းအိုးကို မီးဖိုပေါ်ကချလိုက်ရော။ နနွင်းလေးပါလေကာ ဆိုတော့ အမဲသားအညှီပျောက်သွားပြီး အမဲသား အတုံးလေးတွေကလည်း ခပ်ဝါ၀ါလေးတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။နနွင်းသိပ်များသွားရင်တော့ အမဲသားအတုံး အ၀ါကြီးတွေ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အသားတုံးတွေ နယ်တုန်းမှာ ဆားကိုလျှော့ထည့်ပြီးနယ်ရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆားအပေါ့အငန်ကို နောက်မှ ကြည့်ပြီးပြင်တာပါ။ဟင်းအိုးကို ရေအပြည့်နဲ့ မီးဖိုပေါ်တင်လိုက်ပြီး ရေတွေ တပွက်ပွက်ဆူလာတော့ ဒန်အိုးဖုံးလေး ၈လပ် ဂလပ်ဆိုမြည်လာမယ်။ အဲဒီအခါရောက်တော့မှ အဖုံးကို အသာလေးလှပ်ပြီး အပေါ်ရေလေးကို မြည်းကြည့်လိုက်၊ပေါ့သေးတယ်ဆိုရင် ဆားထပ့်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်။ အစကတည်းက ဆားက သိပ်များသွားမယ်ဆိုရင်တော့ အမဲသားအတုံးတွေကို ဆားအငန်ဓာတ်ဝင်သွားပြီး ပြန်ပြင်လို့ ခက်သွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် အသားတုံးတွေကို စပြီးနယ်ကတည်းက ဆား၊နနွင်းကို လျှော့ထည့်ရတယ်။ နောက်ဆုံး ရေခန်းခါနီး ဆီထည့်တော့လည်း အများကြီးမထည့်ရဘူး။ အိုးအောက်ခြေမှာ ဆီလေးနည်းနည်းပဲရှိနေပြီး အသားတုံးတွေ အိုးဖင်မှာ ကပ်မနေရုံလောက်ပဲဆီကို တည့်ရတာ။ အဲလိုဟင်းချက်ဆီဆိုတာမှာလည်း ပဲဆီကို သုံးရပါတယ်။ နှမ်းဆီကို အဲလို အသားလုံးဖို့ သုံးလိုက်ရင် အသားတွေ ခါးသွားမယ်။ အဲဒီလို အသားတွေကို ရေနြဲ့ပုတ် ပဲဆီလေးနဲ့ လုံးတာကို ပြုတ်လုံးလုံးတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
မြင်နေတယ် အခုထိ မင်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးပဲမြင်ယောင်ရင်း
လွှဲလို့မရဘူး အာရုံက ဒီစက်ကွင်းထဲ
အကြိမ်ခါတွေ မနည်းဘူး အခုထိ မင်းအကြောင်းစဉ်းစားခါနေတုန်း ။
(အခုထိ အိပ်မရဘူးသေးဘူးကွာ… အိပ်မပျော်သေးတဲ့အတွက် အိပ်မက်လို့မဆိုသာပေမဲ့ မင်းရဲ့ အပြုံးမျက်လုံး၊ နမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ မင်းနှုတ်ခမ်းပါးလေးကို အကြိမ်ကြိမ်အခါအခါမြင်ယောင် မိနေတယ်။ မင်းနာမည်ကြားရုံနဲ့ ရင်ခုန်တတ်ခဲ့သူ ကိုယ့်အတွက် အဆွေးအတွေးများစွာနဲ့ပေါ့။)
လေထဲ အမြင့်ပျံလှော်ခတ်ကြမယ် အနာဂတ်ဘ၀ရဲ့နေ့ရက်တွေ
ထာဝရ မင်းနဲ့လက်တွဲပြီး ငါနေချင်တယ်။
(အတူကြည်နူးခဲ့ကြတဲ့ညတွေ ၊ ကမ်းနားမှာ အတူထိုင်ပြီးပြောဖြစ်ကြတဲ့ ဘ၀အကြောင်းတွေ၊ အဲဒီလိုနေခဲ့ကြစဉ်က လေထဲမှာ ၀ဲပျံနေသလို….. ဟိုးအဝေးကြီးမှာ…..အသက်ကြီးတဲ့ ဘ၀အထိ ထာဝရ မင်းနဲ့ လက်တွဲနေထိုင်ချင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ကိုယဆန္ဒသက်သက်ပါလေ။)
- လှည့်စားနိုင်သလား မိုင်တွေဟာ အချစ်ကို
အဖြေကို ပြန်ရှာကြည့်ရင်း မျှော်လင့်ခြင်းပိုဝေးလွင့်ရင်း..။
(ကိုယ်နေတာက မန္တလေး မင်းနေတာက ရန်ကုန်….မိုင်တွေအများကြီးခြားထားကြတယ် ကိုယ်တို့နှစ်ဦးအကြားမှာ။ အနေဝေးရင် ချစ်သူနှစ်ဦးအကြားသွေးအေးသွားစေသလား… ကိုယ်တော့ မတွေးတတ်တော့ဘူး။ အနေဝေးတာတစ်ခုတည်းတော့ ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး တစ်ခြားအကြောင်းတော့ရှိမယ်ဆိုတဲ့ အဖြေကိုတော့ မမျှော်လင့်ပါရစေနဲ့….ကွာ။ ဒါပေမဲ့ တို့တွေ…။)
- မိုးလင်းတိုင်း မင်းရဲ့အနမ်းများနဲ့
ခွဲခွာခြင်း တစ်နေ့ကို ကြုံလာခဲ့ပေါ့
မင်းနှုတ်ခမ်းဖျားက အပြာရောင် မနက်ခင်းတွေ
ငါပြန်လည် တမ်းတရင်း ဘယ်အချိန်ပြန်ဆုံနိုင်မှာလည်း။
(မိုးလင်းလာတဲ့အချိန်တွေမှာ နွေးထွေးခဲ့ရတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေး..။ မျှော်လင့်ချင်းများစွာဖြင့် အတူနိုးထဖြစ်ခဲ့သော နေ့သစ်များ၊ ဒီလိ်ုနေ့သစ်များစွာကို လိုချင်စိတ်ပြင်းစွာဖြင့်ရပ်ဝေးမြေမှာ အလုပ်လာလုပ်ခဲ့သော ကိုယ်။ အခုချိန်မှာတော့ မင်းက မင်းရဲ့ ချစ်သူသစ်ရှိရာ နိုင်ငံသစ်ဆီ ရှေ့ရေး အစီအစဉ်သစ်တွေနဲ့ သွားခဲ့ပြီကော….။ တို့ခွဲခွာခြင်းက အမုန်းမပါခဲ့ဘူး..။ မင်းအဆင်ပြေပါစေကွာ..။ ဒါပေမဲ့…ရင်ခုန်မနက်ခင်းလေးတွေကို သတိရမိတယ်…ဖြစ်နိုင်ရင် မင်းနဲ့ ဘယ်အချိန်ပြန်ဆုံရမလဲ…..မျှော်လင့်ခွင့်ရှိမလား…..ကိုယ်မသိတော့ဘူး..။)
- မိုးဖွဲများကို....ဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့ ....စိတ်ရှိအတိုင်း
ဖြစ်ခဲ့သမျှတွေ မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ ...မိုးသည်းထဲမှာ လမ်းလျှောက်ရင်းနေမယ်......။
(ချစ်သူခင်သူနဲ့ ခွဲခွာရတာ ဘယ်လိုခံစားမိကြသလဲ မသိပါ။ မျက်ရည်များကော… ကျမိလောက်အောင် ခံစားကြရသလား ။ တော်ပြီကွာ……သည်းသည်းမည်းမည်းရွာနေတဲ့ မိုးရေထဲမှာ ငါလျှောက်သွားတော့မယ်..။ ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာကို မတွေးချင်တော့ဘူး..။ သွားမယ်…မိုးရေထဲမှာ….သည်းတန်စွာရွာနေတဲ့ မိုးရေထဲမှာ…ကိုယ်ခံစားရမှုတွေမျောပါသွားမလား။)
- လူဆိုတာ ဘယ်နေရာမဆို အတ္တွနဲ့ပေါ့
ငါတို့နှစ်ယောက် အတူနေတာတွေ ကြာမြင့်လေလေ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့မိုင် တွေထောင်ချီကာ (ဝေးကွာလေ)၂ ဝေးကာနေရင်း.......
(လူမှန်ရင် အတ္တရှိတတ်ကြသလို အရာရာ အတ္တနဲ့ ဆုံးဖြတ်တတ်ကြတာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာ အတ္တစိတ်လေးနည်းနည်းမလျှော့သင့်ဘူးလား..။ ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံမတူ ရည်မှန်းချက်မတူမိကြတဲ့ ကိုယ်တို့တွေဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ မိုင်တွေများစွာဝေးကွာသလို ကွာဝေးခဲ့ကြတယ်။ ဒီတော့လည်းကွာ ကိုယ်တို့လမ်းခွဲဖြစ်ကြတာ မဆန်းပေမယ့် ကိုယ့်ဘက်ကတော့ မဖြစ်ချင်ခဲ့တာ အမှန်ပါ။ မင်းနဲ့ အမြင်တူ ချစ်သူသစ်ဖြစ်ပါစေ….မင်းအတွက် ကိုယ့်ဆုတောင်းပါ….။)
- အလင်းနှစ်သန်းပေါင်းများစွာရယ် ဝေးလွန်းတယ်
အလင်းနှစ်များစွာ ဝေးလွန်းတယ် ဘယ်တော့များ
(လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ချစ်ကြတဲ့ အချစ် ၊ ဘယ်လိုအချစ်က စစ်မှန်သလဲ…အဲဒီလိုအချစ်ကိုရဖို့ကိုရော မျှော်လင့်နိုင်သလား….။ ဟူး….အချစ်…နားလည်မှု စာနာမှုပါတဲ့အချစ်….အလင်းနှစ်များစွာဝေးကွာနေပါသလား….ကိုယ့်အတွက်..။)
Posted by Alex Aung at 8:22 PM No comments:
Whose heart and mind can never be beat
But I can wish it all away withakiss in the rain
I promise to love her and that’sapromise I'll keep
Thank you my lord, good night and Amen.
Posted by Alex Aung at 8:41 PM 1 comment:
Explore new social groupings
If you want to meet new people, you are better off getting into some outside social circles -- ones that have regular get-togethers. Adult sports leagues are almost unbeatable in this respect; they don’t take themselves too seriously, they play onceaweek or so, and usually involveabroad range of people. Don’t go looking for the basic softball league either, as different areas have their own local flavors. An alternative example is the Austin Sports and Social Club (AustinSCC.com) in Austin, Texas, whose sports include dodgeball, kickball and wiffleball. If that homepage with women drinking in bikinis doesn’t inspire you to exploreanew social grouping, we’re not sure what will.
Pull conversation from the setting
These2final steps will ensure you meet new people
Proposeapost-activity
Secureafuture plan
အပြင်မှာတွေ့ဖြစ်ကြတော့ အရမ်းကိုခင်မင်စရာကောင်းပြီး နွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်း တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရခဲ့ပြန်ပါတယ်။ သူ့အလုပ်အကိုင် ပတ်ဝန်းကျင်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆက်ဆံပေးတယ်။ လှုပ်ရှားလည်ပတ်မှုတွေမှာ လိုက်ပါလှုပ်ရှား စေတယ်။
ကိုယ်ရန်ကုန်ကလူတွေကို မကြိုက်ဘူး၊နေထိုင်ရတာကိုလည်း မကြိုက်ဘူးတဲ့….
ဟုတ်တယ် သူဟာ ရန်ကုန်ဇာတိမဟုတ်ဘူး လားရှိုးကပါ။ အလုပ်အကိုင်ရာထူးကြောင့် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းမှာ ရာထူးမြင့် သူပါ။ သူနဲ့ ဖြစ်တည်မှု အစပိုင်းမှာ ကျွန်တော့်ဘက်က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ မခံစား မိသေးပါဘူး ။ မင်းငါ့ကို သံယောဇဉ်တွေပေးတယ် ၊ သူ့ကို ခွဲသွားမယ်ဆိုရင် မနှုတ်ဆက်ပဲတိတ်တိတ်လေး ထွက်ခွာသွားပေးပါ စတဲ့စကားတွေကို သာမန်ပဲနားထောင်မိခဲ့ပါတယ်။ သူ့အလုပ်သဘော သဘာဝအရ ရန်ကုန်မှာ တစ်လ နယ်တွေမှာ တစ်လစသည်ဖြင့် လုပ်ကိုင်နေထိုင်ရပါတယ်။
မတွေ့ဖြစ်ကြတဲ့ လတွေမှာ ကျွန်တော့်ဘက်က သူ့ကို အရမ်းလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ ခံစားမိလာတယ်။ လူဆိုတာ အထီးကျန်မနေနိုင်တဲ့ သတ္တ၀ါတွေပဲ …အချစ်ကိုရတော့ စွဲလန်းမှု အချစ်ဒီဂရီတွေ..မတွေ့ရတဲ့ ကာလမှာ မြင့်တက်လာရပြန်တယ်။ ရန်ကုန်မရောက်ခင် သူမေးလ်မပို့ဘူး ၊ဖုန်းမဆက်ဘူး အလုပ်များနေလို့ ဆိုပြီးနားလည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့လည်း သူ့အမေနဲ့ သူ့ညီက ရန်ကုန်အိမ်မှာလာနေတော့ ကိုယ်တို့ နေ့တိုင်းတွေ့လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့။ တစ်ပတ်မှာ သူတွေ့မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမှ တွေ့ခွင့်ရပါတော့တယ်။ ကိုယ့်ကိုထားသွားချင်လို့ ဒီလိုပြုမူတာလားလို့ တစ်ခါတစ်ရံ သံသယ၀င်ပေမဲ့ သူ့အလုပ်အကိုင် သဘာဝကို နားလည်နေသူ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အစွမ်းကုန် စိတ်ရှည်နားလည်ပေးနေမိပြန်ပါတယ်။
အချစ် တစ်ခုဖြစ်တည်မှုအပိုင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ချစ်နေယုံနဲ့ မပြီးဘဲ နားလည်မှုဆိုတာလိုအပ်ကြောင်း နားလည်လာမိတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုပါ။ အဆင်ပြေစွာနဲ့ တစ်သက်လုံး အတူနေထိုင်ဖို့ မျှော်မှန်းပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်မှန်း သိပေမဲ့ ချစ်ကြပြီဆိုရင် အတူနေချင်မိတာ အပြစ်တော့ မဆိုသာပါဘူးနော်။
မင်းကို ကိုယ်ချစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ အချစ်ဆုံးဖြစ်နေတတ်တာ ကိုယ့်သဘာဝပဲ။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ သင့်တော်တဲ့ အရာအားလုံးမမှားဘူး ကောင်းမွန်သင့်တော်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကိုယ်လက်ထပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ မင်းနဲ့လည်း ဆက်ဆံရေးကို သံယောဇဉ်မဖြတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့စကားတွေ အတည်မဖြစ်လာခင်အထိ ကျွန်တော်ဆက်ချစ် နေနိုင်မှာပါ။
ရေးခဲ့သောအကြောင်းအရာတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ ရှိခဲ့ဖူး ရှိနေခဲ့တဲ့ ချစ်သူများနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့အကြောင်းပါပဲ။ လူတစ်ဦး ပုံစံတစ်မျိုးစီဆိုပေမဲ့ သူတို့ဆီမှာ အခြေခံတူညီချက် လေးတွေ တော့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအခြေခံစိတ်လေးတွေက ကျွန်တော့်ဆီမှာလည်းရှိတာ အမှန်ပါပဲ။ အတ္တ ကိုယ့်အတွက်သာ ကြည့်တတ်တဲ့ အတ္တ အရာရာ ကိုယ့်အတွက်သာဆို တာမျိုးတွေ ၊ ခံစားချက်တွေကို ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာ အလျော့အတင်းရှိသင့်ကြောင်း ၊ နားလည်မှုဆိုတာ အမှန်အကန်လိုအပ်ကြောင်း အသိရရှိခဲ့မိသလို ၊ သတိနဲ့ ကိုယ့်အတ္တကို လျော့ပေးပြီး ချစ်တတ်မှာသာ အဆင်ပြေမှာအမှန်လို့ အခုတော့ ကျွန်တော်လက်ခံပါပြီ။
"Neo" မကြာခင်သူ့ချစ်သူအသစ်ရှိရာ စင်ကာပူကို ဘ၀ရှေ့ရေး အတွေးများစွာနဲ့ သွားတော့မယ်။
"Ko Sunny" သူ့အကြောင်း ဘာမှပြေစရာမရှိပါဘူး။အချစ်ရဆုံးကျွန်တော့်အစ်ကိုကြီးပါ။
"သူရ" အရမ်းအေးစက်တဲ့ အလုပ်ကို ဦးစားပေး ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ချစ်သူ။ ဘယ်အချိန်မှာ လမ်းခွဲရမယ်မသိ……......
Posted by Alex Aung at 7:38 PM 1 comment:
အတူယှဉ်တွဲပြီး နေလိုက်ချင်တယ် ဒီတစ်သက်မခွဲဘူး ၊ ဒီရင်မှာ ချည်နှောင်ထားတဲ့ အချစ်စိတ်က သက်ဆုံးထိတိုင်။
လူစိမ်းနှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်မိကြပြီဆိုရင် သက်ဆုံးထိတိုင် အတူနေချင်ကြတာ၊ ချစ်ခင်နှစ်သက်လို ကြတာ စတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တည်မိမှာ အမှန်ပါပဲ။ တစ်ယောက်ရဲ့ အားသာချက်ကို လေးစားနှစ်သက်မိသလို၊ သူ့အားနည်းချက်ကိုလည်း ဖြေတွေးတွေးပေးနိုင်မှသာ ကိုယ့်အတ္တကိုလျော့ပေး မိနိုင်ပြီး အချစ်ဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားချက် အစစ် အမှန်ဖြစ်တည်လမယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ထင်မိပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အချစ်ဆုံးသူရယ်လို့ ထင်မိတဲ့ ချစ်သူသုံးယောက်ရှိခဲ့ဖူး ၊ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိပြီဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ပထမဆုံးချစ်သူဖြစ်တဲ့ Neoနဲ့တွေ့မှ စတင်ခံစားဖူးတာအမှန်ပါပဲ။ စကားပြောကောင်းတာ၊အရမ်းကို နွေးထွေးလှိုက်လှဲတဲ့ ဆက်ဆံမှုမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံခံရတဲ့အတွက်(ပထမဦးဆုံး ရန်ကုန်ကိုလာတွေ့တဲ့ခရီးမှာပဲ) သူ့ကိုချစ်ခင်နှစ်လိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်မိပါတယ်။ မိမိဘ၀မှာ အထီးကျန်စိတ်ခံစားမိနေချိန် သူနဲ့ဆုံရတာ ပျော်ရွှင်မိသလို အရမ်းကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရပါတယ်။ ငယ်ရွယ်သူ စိတ်ကူးအတိုင်းပါပဲ ခရီးဝေးကို မိသားစုမပါပဲ သွားခွင့်မရှိသလို မသွားခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ဟာ သူနဲ့နေ့စဉ်တွေ့နိုင်မယ်၊ ပျော်ရွှင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးသက်သက် ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ နယ်မြေစိမ်းကို တစ်ယောက်တည်းခြေချခဲ့ပါတယ်။
အရမ်းကို နီးကပ်သွားရင် အရမ်းကို ဝေးကွာသွားမှာ အမှန်ပဲ.....ဆိုတဲ့ စကားအဓိပ္ပာယ်ကို ရန်ကုန်မှာနေလာတဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ ပိုသိလာရပါတယ်။ မိမိချစ်မိသူရဲ့ စိတ်၊အကြိုက်တွေကို သိအောင်ကြိုးစားသလို နီးကပ်အောင်ကြိုးစားမိတာနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ သူနဲ့အဝေးကွာဆုံးနေရာကို ရောက်ရှိသွားသလိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင် နေတယ်၊ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တာကိုသာ ကြိုက်နှစ်သက်သူနဲ့ ကျွန်တော့်လို နှစ်ကိုယ်ကြားတီးတိုးဆိုနေရ တာကို နှစ်သက်သူ ဘယ်သူ့အလွန်မှမဟုတ်တဲ့ လွန်ဆွဲပွဲ အဖြေကို သယ်သူမှ မဖြေမိခင် အဖြေထုတ်လိုက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအဖြစ်သာ နေထိုင်ကြပါစို့။သူ့ဖက်က လမ်းခွဲစကားမပြောပေမဲ့ အေးစက်လာတဲ့ ၊လျစ်လျူလျှုမှုတွေများလာတဲ့ ဆက်ဆံရေးနဲ့အတူ မိမိကို ချစ်သူအဖြစ်သဘောမထားခဲ့ကြောင်း သိလာရတော့မိမိဖက်က အချစ်စိတ်တွေကိုလျော့ သူ့အကြိုက်သိ အတွင်းစိတ်ကိုနားအလည်ဆုံး သူငယ်ချင်းအဖြစ်သာ သက်ဆုံးတိုင်ရပ်တည်နေမည်သာ။
လူတစ်ယောက်ကိုမနှစ်သက်တော့ရင် သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကို အမှတ်ထင်ထင်ဖြစ်လာမိတတ်တယ်...
လူတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူခင်သူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့အပြစ်ဟူသမျှ မြူမှုန်အဖြစ်လောက်တောင် မမြင်မိတတ်ကြတာအမှန်ပါပဲ။ လူတစ်ယောက်ကို မချစ်ခင် မနှစ်သက်တော့တာနဲ့အမျှ သူ့ရဲ့အတ္တကြီးမှု၊တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တာတွေကို တရေးရေးမြင်ယောင်စိတ်ပျက်မိတာနေ့စဉ်အမျှ၊ ဒီလို...ဒီလိုအချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ အစ်ကိုလိုတစ်မျိုး ချစ်သူလိုတစ်သွယ်ချစ်ရမယ့်သူအဖြစ် ခံစားမိပြန်တဲ့ ကိုဆန်နီနဲ့ တွေ့ရပြန်တယ်။
Posted by Alex Aung at 8:31 PM No comments: